Ku dhawaad 20 dagaalyahan oo uu ku jiro hoggaamiye sare oo katirsan Al-Shabaab oo lagu dilay weerar ka dhacay Shabeellaha Hoose - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaKu dhawaad 20 dagaalyahan oo uu ku jiro hoggaamiye sare oo katirsan Al-Shabaab oo lagu dilay weerar ka dhacay Shabeellaha Hoose
Ku dhawaad 20 dagaalyahan oo uu ku jiro hoggaamiye sare oo katirsan Al-Shabaab oo lagu dilay weerar ka dhacay Shabeellaha Hoose
September 29, 2019 Puntland Mirror Somalia 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ku dhawaad 20 dagaalyahan iyo hoggaamiye sare oo katirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose, sida ay ku warantay warbaahinta dowladda.
Weerarka oo ay qaadeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa fiidnimadii Sabtida ka dhacay koonfurta deegaanka Awdhiigle ee gobolka Shabeellaha Hoose, Radio Muqdisho ayaa sidaa tabisay, iyadoo soo xiganaysa saraakiil katirsan ciidamada.
Ku xigeenkii madaxa jabhadaha ee maleeshiyada Al-Shabaab oo lagu magacaabo Xasan Abshir Jibriil ayaa lagu dilay weerarka, sida ay sheegtay idaacada dowladdu.
Xasan ayaa la sheegay in uu hoggaamiye ka ahaa weeraro badan oo maleeshiyada Al-Shabaab ay horey uga geysatay deegaano kuyaala gobolka oo ay kamidyihiin Jannaale iyo Bariire.
Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa bishii lasoo dhaafay ee Agoosto Al-Shabaab ka qabsaday Awdhiigle, oo ah magaalo beereed qiyaastii 70 kiilomitir dhanka koonfur-bari kaga beecan caasimada Muqdisho.
Dowladda federaalka Soomaaliya oo yaraysay xanibaada duulimaadyada ee ay saartay Kismaayo
Wefdi ka socda dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya oo masuuliyiinta amniga Puntland kulan kula qaatay Garoowe
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland has warned Somaliland it will pay heavy price if the Somaliland did not stop its movement to bring ballot boxes to Sool and Sanaag regions. In an interview with Radio Daljir, Puntland’s [...]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Puntland ayaa muddo 19-sanno ah kadib markii ugu horeysay yeelatay shaybaarka tayo dhawrka badeecadaha. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa shalay oo Arbaco ahayd magaalada Boosaaso ka furay shaybaarka oo loogu talogalay in [...]